मुक्तक | BARDIYA ONLINE |
स्वतन्त्र नेपाल (१) बनाउनु छ यो समाचार लाग्छ कि लाग्दैन भनिदेउ न ए सरकार ! लाग्छ कि लाग्दैन प्रत्येक दिन खाडीले रातो बाकस पठाउछ, रातो बाकसमा भन्सार लाग्छ कि लाग्दैन? (२) नगर रगतको अपमान धर्म कमाउछौ कुरा बुझ न जवान धर्म कमाउछौ, प्रेमको प्रमाणमा हात काट्नु भन्दा बरु गर न रक्तदान धर्म कमाउछौ। (३) कुर्सीमा पुग्न जनतालाई बनाइन्छ ढाल, सहमत हुनुहुन्छ ? झन भन्दा झन देश भएको छ कंगाल, सहमत [पूरा पढ्नुहोस्]
मुक्तक : यो कर्म हारालाई
बिश्वास गर्न हिच्किचाउने यो कर्म हारालाई । को तड्पियो को रमायो बुझाउछु सारालाई । मुसलधारे पानीले पनि बगाउन सकेको छैन, तिम्रो यादमा निरन्तर बग्ने यी आँशु धारालाई ।। ✍ राम कृष्ण पाण्डे (अमन एकल) – रसुवा । हाल अबुधाबी युएई [पूरा पढ्नुहोस्]
शितल विवशको तीन मुक्तक
✍ शितल विवश, मधुवन नगरपालिका, बर्दिया । मुक्तक – १ म आउनेछु फर्केर जरूर, विश्वास गर्नुस । आज भएपनि निकै दुर,विश्वाश गर्नुस । हृदयले जोडेको सम्वन्ध हो हाम्रो, हुने छैन सपना चकनाचुर,विश्वास गर्नुस ।। मुक्तक – २ हैन म त परि, तिम्रो नजर उस्तै हो । अनि फुल मन्जरी, तिम्रो नजर उस्तै हो । कहीले देवी भन्छौ, कहीले छहारी, उपमा थरीथरी, तिम्रो नजर उस्तै हो ।। मुक्तक – ३ अचेल मान्छेहरू भ्रमैभ्रममा, [पूरा पढ्नुहोस्]
मुक्तक – १ धेरै थोरै यो मन भित्र, आश राखेर । तिम्रो साथ पाउँछु भन्ने, बिश्वास राखेर । यो सफर त्यो गन्तब्य, कठिन बनाएछु, पुग्नै पर्ने लक्ष्य तिमि, खास राखेर ।। मुक्तक – २ न भुल्न सकियो, न साथ पाउन सकियो । न पुर्णरुपमा तिमिलाइ, गुमाउन सकियो । आउँछन यादहरु, घोचिरहन्छन तिर जस्तै, न सम्हाल्न सकियो, न फिर्ता पठाउन सकियो ।। मुक्तक – ३ जब कोहि छ भन्ने आधार भुल्न खोजीन्छ । अनी उ संगको त्यो प्यार [पूरा पढ्नुहोस्]
श्रेष्ठ समनश्रीका तीन मुक्तकहरु
मुक्तक – १ भगवानले यति सुन्दर मुहार बनाईदियो । मान्छेले त्यै मुहार बिक्ने बजार बनाईदियो । तिमी मान्छेलाई भगवान ठानिरहेछौ भने अब, सोच भगवानले नै यो कस्तो विचार बनाईदियो ।। मुक्तक – २ मान्छेका हर व्यबहार, गुन कहाँ हुदो रैछ र । भगवानका पनि त चानचुन कहाँ हुदो रैछ र । म यहि सम्झेर चित्त बुझाईरहेछु हिजोआज, आकाशसँग पनि त सधैं, जून कहाँ हुदो रैछ र ।। मुक्तक – ३ “लडौला, नआऊ नजिक” यौटा [पूरा पढ्नुहोस्]